OTU ESI TINYE VIDIYO NA STEAM - STEAM - 2019
Ịgbakwunye vidiyo gaa Steam
Ọtụtụ ndị ọrụ maara nke ọma na usoro UltraISO - nke a bụ otu n'ime ọrụ ndị kachasị ewu ewu maka ịrụ ọrụ na mgbasa ozi na-ekpofu ihe, faịlụ ntanetị na ngwanrọ. Taa, anyị ga-ele anya iji debe ihe oyiyi ahụ na diski na usoro a.
Ihe omume UltraISO bụ ngwá ọrụ dị irè nke na-enye gị ohere ịrụ ọrụ na ihe oyiyi, dee ha na windo kọmputa USB ma ọ bụ diski, mepụta ụgbọala nwere ike ịbanye na Windows OS, kwụo windo kwadoro na ọtụtụ ndị ọzọ.
Kedu esi agba ihe oyiyi na disk site n'iji UltraISO?
1. Fanye diski ka akpọ ya ọkụ, wee malite usoro mmemme UltraISO.
2. Ị ga-agbakwunye faịlụ ihe oyiyi na usoro ihe omume ahụ. Enwere ike ime nke a site na ịdọrọ faịlụ ahụ n'ime window mmemme ma ọ bụ site na menu UltraISO. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ ahụ. "Njikwa" ma gaa ihe "Meghee". Na windo nke gosipụtara, pịa okpukpu abụọ.
3. Mgbe oyiyi nke diski gbakwunyere na ihe omume ahụ, ị ​​nwere ike ịga n'ihu usoro ọkụ ahụ n'onwe ya. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ dị na nkụzi ihe omume ahụ. "Ngwaọrụ"wee gaa "Ọkụ CD".
4. Na windo egosipụtara, a ga-akwado ọtụtụ parameters:
Mbanye Ọ bụrụ na ịnwe draịvụ njikọ abụọ ma ọ bụ karịa, chọpụta nke ahụ nwere ụgbọala eletriki ndekọ;
Dee ọsọ ọsọ E debere ndabara na kachasị, ntụgharị. ngwa ngwa. Otú ọ dị, iji mee ka ekwenye ekwenye na ederede ahụ, a na-atụ aro ka ịtọ ntọala dị ala;
Dee usoro Hapụ ọnọdụ ndabara;
Ihe oyiyi Nke a bụ ụzọ na faịlụ ahụ a ga-ede na diski. Ọ bụrụ na tupu a họrọ ya na ezighi ezi, lee, ị nwere ike ịhọrọ ihe ị chọrọ.
5. Ọ bụrụ na ị nwere disk rewritable (RW), ọ bụrụ na ọ nwererịrị enwere ozi, ịkwesịrị ikpochapụ ya. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ "Clear". Ọ bụrụ na ịnwe diski zuru oke, kpoo ihe a.
6. Ugbu a, ihe niile dị njikere iji ọkụ na-ere ọkụ, n'ihi ya, ihe niile ị ga-eme bụ pịa bọtịnụ "Record".
Biko mara na ị nwekwara ike ịkụpụ disk nkwuputa site na ihe oyiyi ISO ka, dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịmegharịa Windows mgbe e mesịrị.
Usoro amalite, nke na-ewe ọtụtụ minit. Ozugbo a kwadoro ndekọ, a ga-egosipụta ọkwa na ihuenyo banyere njedebe nke usoro ọkụ ahụ.
Hụkwa: Mmemme maka ịdekọ diski
Dịka ị pụrụ ịhụ, usoro UltraISO dị mfe iji. Iji ngwá ọrụ a, ị nwere ike ịdekọ ihe niile gbasara mmasị na mgbasa ozi ndị na-ewepu.
https://termotools.com ig.termotools.com © Steam 2019